နေအိမ် > အိမ်ရာအတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ
Haven အတွက်လျှောက်ထားနည်း။ အိမ်၊ ဘေးကင်းသော ဂုဏ်သတ္တိများ
လျှောက်ထားရန် နှစ်ရှည်အိမ်ရာ တက်ကြွမှုရှိရမည်။ ဗစ်တိုးရီးယားအိမ်ရာမှတ်ပုံတင် (VHR) လျှောက်လွှာ။ လျှောက်ထားသူအသစ်အနေဖြင့် VHR အတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်လက်ရှိလူမှုရေးအိမ်ရာပိုင်ဆိုင်မှုမှ လွှဲပြောင်းလိုပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ VHR အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်နှင့် လျှောက်ထားရန် အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင် VHR တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်ပါ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားသင့်အားဖုန်းဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပေးပါမည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်းကြောင့်ရေရှည်အိမ်ရာရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်များရှိနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် လက်ရှိတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေပါက သို့မဟုတ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတော့မည်ဆိုလျှင် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အရေးပေါ်နေရာထိုင်ခင်း.
သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကအငှားလုံခြုံရေးပံ့ပိုးမှုလိုအပ်လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့ ပုဂ္ဂလိက ငှားရမ်းကူညီရေး အစီအစဉ် အကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။